यी हुन् निकै महँगा गाडी चढ्ने चर्चित नायिका, जो करोडौंको गाडी चढ्छन्” – Online Khabar 24
यी हुन् निकै महँगा गाडी चढ्ने चर्चित नायिका, जो करोडौंको गाडी चढ्छन्”
धेरैलाई हामीले सधै फिल्मी पर्दामा देखिरहने क’लाकारको जिवनशैली कस्तो होला भनेर जि’ज्ञासा लाग्न सक्छ ।
नेपाली सिनेमा क्षेत्रका नायक नायिकाहरू प्राय सबैले गा’डीचढेर हिँड्ने गर्छन् । फिल्म उद्योगमा आफ्नै सवारीसाधन नभएका कलाकार भेट्न मु’स्किल पर्ने गर्छ, अहिले ।
पछिल्लो समय आफ्नै का’र नभएका हिरो–हिरोइन, गायक–गायिका तथा मोडल भेट्न गाह्रो पर्छ ।
फिल्म, मोडलिङ, विदेश प्रोग्राम, स्वेदश प्रोग्राम तथा म्युजिक भिडियोबाट समेत मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले अलिकति चलायमान कलाकारलाई महँगो जीवनशैली व्यतित गर्न असहज छैन । आउनुहोस् आज हामि चर्चित महिला कलाकारहरु कस्तो गाडी चड्छन भनेर हजुरहरुलाई बताउने छौँ ।
सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ निर्माण गरेकी अभिनेत्री पूजा शर्मा यतिबेला सिनेमा ‘रामकहानी’को छायाकंन सकेर पोष्ट प्रो’डक्शनको काममा छिन् । पूजाले इको स्पोट नामक कार चढ्दै आएकी छिन् । पूजाको यो कारको मू’ल्य ३४ लाख पर्छ । उनी आफैले यो कार चला’उँछिन् पनि ।
केहि अघिमात्रै आयुष्मान देशराज जोशीसंग इन्गेजमेन्ट गरेकी प्रियंका कार्की दर्शकहरुले एकदमै रुचा’एइकी अभिनेत्री हुन् । उनि साढे तेत्तीस लाख मूल्य बराबरको टाटाको जेस्ट र असी लाख भन्दा धेरै मूल्य पर्ने हुन्डाईको टक्सन गाडी चढ्छिन । उनि विशेष काम पर्दा मात्र टक्सन गाडीमा हिड्ने गर्छिन ।
सुरुमा उनी ग्रा’न्ड आ’इटेन कुदाउँथिन् । हाल उनी इको स्पोर्टस् चलाउँछिन् ।अर्की चर्चित हिरोइन वर्षा सिवाकोटी पनि कारधनी भएकी छिन् । उनले झन्डै एक महिनाअघि होन्डा सिटी कार किनेकी हुन् । कार किन्नुअघि उनी स्कुटरमा कु’द्ने गर्थिन् । सहज जीवनशैली अ’पनाउन कार किनेको उनी बताउँछिन् । यो कारको मूल्य ५३ लाख भन्दा माथि पर्छ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर निसानको किक गाडी चढ्छिन् । उनले यो गाडी १ वर्ष पहिले खरिद गरेकी हुन् । ड्राइभिङमा सौखिन रहेकी मानन्धरले यो गाडी किनेपछि काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको लामो यात्रा गरेकी छिन् । उनले यसअघि हुन्डाई आइ टेन र हुन्डाई आइ ट्वान्टी चढेकी थिइन् । अहिले चढिरहेको किकको लुक्स, लक्जरियस, भित्री डेकोरेसन मनपर्ने उनी बताउँछिन् । साथै, उनको बसाई गोदावरी भएकाले बाटोका कारण पनि कि’क सहज भएको उनको अनुभव छ । यसको मूल्य ४८ लाख भन्दा बढी पर्छ ।
निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले गएको वर्ष मात्रै हुन्डाईको आई ट्वेन्टी एक्टिभ किनेकी छिन् । ‘छ’क्का पञ्जा’को सफलतापछि दीपाश्री निरौलालाई टिमले उपहारस्वरुप यो कार दिएको थियो । दीपाले किनेको हुन्डाईको आई ट्वेन्टी एक्टिभलाई ४० देखि ४२ लाख पर्छ । यस अघि दीपा सिल्भर कलरको सेन्ट्रो चढ्दै आएकी थिइन् । यतिबेला उनी सिनेमा‘छ’क्का पञ्जा ३’को छायाकंनमा छिन् ।
पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी अभिनेत्री तथा मोडल एलिजा गौतम यतिबेला सुजुकीको ब्रेजा गाडी चढ्छिन् । यो गाडी उनको बुबाले किनिदिएका हुन् । अहिले यो गाडीको मूल्य ४१ लाख भन्दा माथी छ । ब्रेजाको पिकअप, हाइट, लुक्स राम्रो लाग्ने उनी बताउँछिन् । गाडी किनेपछि पोखरासम्म लामो यात्रा गरेको उनले सुनाइन् । यो खबर समाचार बाटिकाबाट साभार गरियको हो । यस्तै नेपाली फिल्ममा थुप्रै अभिनेत्र र अभिनेत्रीहरु आउने गर्छन्।
कोही सफल हुन्छन् भने कोही त्यसै हराएर जान्छन्। आफ्नो कलाले मान्छेको मन जित्ने अभिनेत्रीहरुको सदाबाहर यो क्षेत्रमा चर्चा भईरहन्छ।
अभिनेत्री गौरिका मल्ल, करिष्मा मान्नधर, मिथिला शर्मा जस्ता नायिकाहरु सदाबाहर चर्चा भई रहने अभिनेत्रीहरु हुन्। पछिल्लो समय प्रियंका कार्की, स्वस्तीमा खड्का, केकी अधिकारीको चर्चा हुने गरेको छ। यि अभिनेत्रीहरुले आफ्नो रुप र कलाले प्राय दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएका छन्।
अहिलेका युवापुस्ताको लागि फिल्ममा काम गर्ने ठुलो सपना भएको छ। यो क्रम हरेक समय जारी हुन्छ तर कोही कोही मात्र यो क्षेत्रमा टिक्न सफल हुन्छन्।
हामीले फिल्मी दुनियाँंमा देख्ने र बाहिरी दुनियामा देख्ने अभिनेत्रीहरुको जीवन फरक हुने गर्छ।
उनीहरु विभिन्न समारोहमा जाने, फिटनेसको ख्याल गर्दै जिम जाने तथा बाहिर खुला रुपमा हिँड्ने गर्दछन् । कुनै समय ती सुन्दर अभिनेत्रीहरुले आफूलाई बिना मेक अप नै हिँड्न मन पराउँछन् । यस्ता कैयौं घटनाहरु रहेका छन् जुन अभिनेत्रीहरुलाई बिना मेकअपमा देखिएको छ ।
हामीले सामाजिक सन्जालबाट यि तस्विरहरु खोजेका छौ। तपाईहरुले फिल्ममा देख्ने अभिनेत्री रियलमा देख्दा आकाश पातलको फरक पाउनु हुनेछ।
यो खबर खबर नेपालीबाट साभार गरियको हो ।
Prevसन्तानलाई होचो हुन नदिन बेलैमा गर्नुहोस् यी ६ काम, हर्लक्क बढ्नेछ उचाइ !
nextएउटा यस्तो डरलाग्दो तथ्याङ्क ! विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एक जनाले गर्छन् आ’त्मह’त्या